Antoko Vitantsika io: Miantso ny rehetra ho tony, ary tsy hihoatra ny ara-dalàna
mercredi, 26 décembre 2018 10:00
Amin'izao fitadiavana ny marina ara-pifidianana izao, na dia maro aza ny fo mety hiakatrakatra, dia manainga ny rehetra, na ny mpomba ny andaniny, na ny ankilany, na ireo nanao vato fotsy sy vato maty, na isika marobe tsy tonga nifidy, mba ho tony, tsy ampiasa hery, na fiteny mandratra, fa samy hiaro ny marina hatrany.
Tsy vahaolana ny fifandonana ka hitondra ny Firenentsika amin'ny krizy hafa indray. Tsy misy tsy vitan'ny fifandeferana sy fifampiresahina.
Miandry ampitoniana ny vokatra tena marina avoakan'ireo rafitra tokony hamoaka izany, aoka kosa mba ny tena fanapahana araky ny rariny sy ny hitsiny, manara-dalàna no avoaka fa sanatria tsy hisy mizana mitanila, na hisy kolikoly sy fampitahorana.
Izay mandresy aorian'izay no ho Filohan'ny Firenena, izay tsy maintsy eken'ny rehetra, ary hiara-hiasa amin'ny rehetra.
Ny Antoko Vitantsika io, dia manaja hatrany, araka ny tarigetrany ny fampihavanam-pirenena, ny fampandraisana anjaran'ny rehetra mitambatra amin'ny fampandrosoana, ny fiandrihanam-pirenena, tsy hitsabatsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha anatin'ny Firenena, ary ny fanajana ny Lalàna misy.